सत्ता थरिथरिका – BRTNepal
गोपी मैनाली २०७७ माघ ३० गते १८:०४ मा प्रकाशित
मानिसलाई लाग्छ, सत्ता भनेको राजनीति मात्र हो । राजनीतिज्ञहरू मात्र सत्ता चलाउँछन्, सत्ताको खेलमा लाग्छन् । र, शक्तिको भरपुर खेल गर्छन् । विधि र मानक स्थापित गरी भोक, प्यास, अवसर, शक्ति र सम्बन्धको अभ्यास गर्छन् ।
राजनीति देखिने सत्ता हो । सतहमै देखिने औपचारिक सत्ता हो । राजकीय सत्ता हो । राज्यका अवसरहरूको खेल हुने सत्ता हो । त्यसैले यो सबैभन्दा वैद्य सत्ता पनि हो । सत्तामा स्वाद हुन्छ । त्यसैले सङ्घर्ष गरेर पनि सत्तामा जाने लालसा राजनीतिका पात्रहरूमा हुन्छ । सत्ता खेल खेल्न राजनीतिक खेलाडीहरू माहिर हुन्छन् । स्वाद नहुँदो हो त खेल नै निरस हुन्थ्यो, सत्तासंघर्ष पनि हुँदैनथ्यो । सत्तामा राप र ताप हुन्छ । सत्तामा ओज हुन्छ, जिम्मेवारीको बोझ पनि हो ।
जे भए पनि सत्ता समाजको मियो हो । सत्ताले कसैलाई केही गर्न वा नगर्न बाध्य गराएर समाज व्यवस्था धानेको हुन्छ । परिष्कृत सत्ता सभ्यता र संस्कारको शक्ति हो । अपरिष्कृत भए पनि बाध्यतामा नागरिकहरू सत्तालाई स्विकार्ने विकल्पहीन बाध्यतामा हुन्छन् ।
तर समाजमा एउटै मात्र सत्ता हुँदैन, देखिने सत्ता मात्र पनि हुँदैनन् । सत्ता सतहमा मात्र पनि हुँदैनन् । नदेखिएका सत्ताहरू देखिएका सत्ताभन्दा कैयन गुणा शक्तिशाली र मजबुत हुन्छन् । मानिसहरू धेरै थरिका नदेखिने सत्ताहरूमा, देखिने सत्ताहरूमा, विश्वासका सत्ताहरूमा, सिर्जनाका सत्ताहरूमा, संस्कारका सत्ताहरूमा राम्रा–नराम्रा धेरै सत्ताहरूमा लागेका हुन्छन् ।
राजनीतिको सत्ता सार्वभौमसत्ता हो । त्यसैले यसलाई सबैले देख्छ, भोग्छ, प्रभावित हुन्छ । सार्वभौमसत्ताको भोग र भागिदारी लोकतन्त्रको मूल्य हो । साझा र स्वीकार्य मानकहरू स्थापित गरी शक्तिको अभ्यास गर्नु राजनीतिक सत्ताको चरित्र हो । तर यस बाहेकका सत्ताहरू राजनीति जति व्यापक हुँदैनन्, त्यत्तिकै वैद्य र औपचारिक हुँदैनन् । कतिपय सत्ताहरू त अवैध र भूमिगत पनि सङ्गठनका रूपमा पनि रहन्छन् ।
तर सबै सत्ताको साझा चरित्र त्यहाँ शक्ति हुन्छ, स्वाद हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मूल्य मानकका औपचारिक अनौपचारिक विधि विधान पनि हुन्छ । त्यति भईकन पनि उछिनापछिनको खेल हुनु ती सत्ताहरूको अन्तर्य हो ।
सबै सत्ता प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, वैध–अवैध, अरू सत्तासँग सम्बन्धमा रहन्छ । एक अर्कालाई प्रभाव पार्छन् । तर केही सत्ता यस्ता हुन्छन्, जो सबैलाई आदर्श र आचरण मात्र सिकाउँछन् ।
मानव सत्ता मानव ‘स्व’ को मार्गदर्शक हो । राज्य सत्ता लगायतका वैध सत्ताहरूलाई यसले दिशा निर्दिष्ट गर्दछ । अरू सत्ताका लागि सीमारेखा कोरेर नै मानव सत्ता अस्तित्वमा छ । यसले मानव अस्तित्व र सम्बन्धका सीमा र सम्बन्ध उजागर गर्दछ । तर म यहाँ छु भन्दैन, मान्नेले देख्छ, नमान्नेले देख्दैन । जति देखिएको छ, अपनाइएको छ, त्यसैका आधारमा राज्य, सङ्गठन र अरू धेरै संस्थाहरू यहाँसम्म आइपुगेका हुन् ।
तर मानव सत्ता अरू जीव–वनस्पति सत्ताप्रति निर्विवेक छ । आफ्नै सुख सन्तुष्टिका लागि, स्वाद समृद्धिका लागि समस्त मानव सत्ता केन्द्रित छ । अरूको प्रतिकार गर्न नसक्दा, बलात् समर्पित हुँदा मानव सत्ता सुख भोगी भएको छ । के प्रतिकार नगर्दैमा निर्विवेक हुनहुन्छ ? धेरथोर सबै सत्ताहरू कठोर हुन्छन् । तर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्ने मानिसले श्रेष्ठता पुष्टिका लागि पनि ‘मानव केन्द्रित’ मात्र नबनी विवेकको व्यवहार अरू जाति प्रजाति प्रति गर्नु नैतिक दायित्व हो । स्थूल सत्ताले नै निष्ठुरता र आफू केन्द्री करणको पाठ सिकाएपछि अरू सत्ताले त्यसको सिको गर्ने नै भए ।
परिवारभित्र पनि सत्ता छ । सत्ताले कार्य र भूमिकाको विभाजन गरिरहेको छ । सत्ताका पार्टपुर्जाहरू सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । र पनि शक्ति र सम्पत्तिमा रमाएका छन् । परिवारभित्र शक्तिको देख्य–अदेख्य सङ्घर्ष छ, हार र जीत छ । भुसको आगो झैँ अन्तरसंघर्ष भुत्भुतिएको छ । सत्ता नवीकरण र हस्तान्तरण छ । सत्ताको यही अभ्यासले परिवारलाई सङ्गठनको पहिचानमा राखेको छ ।
पारिवारिक सत्ता बाहिर व्यक्तिहरू आफ्नो चाख, स्वार्थ र स्वादमा अरूहरूसँग मिलेर सत्ता गठबन्धन गर्दछन्, अर्को सत्ता बनाउँछन् । राज्यसत्ता बाहेक अरू सत्ताहरूमा स्वैच्छिक संलग्नता र बहिर्गमनका बाटोहरू खुला हुन्छन् । तर पनि सत्ता संरचनामा पुगेपछि बर्हिगमनभन्दा संलग्नता नै रोजिएको छ । सत्ताको स्वाद मीठो भएकोले नै बहिर्गमन शायदै रोजिँदैन ।
समाजमा पुरुष सत्ता र नारी सत्ता अलग अलग र संयुक्त अस्तित्वमा छन् । दुवै सत्ताभित्र पहिचान र अस्तित्वको अनवरत युद्ध छ र त्यो युद्ध मानव सत्ता रहेसम्म सकिने खालको पनि छैन । पुरुष सत्ता जोदाहा छ, नारी सत्ता शालीन छ तर अन्तर्मुखी छ । शालीनताको औपचारिक आयतन धेरै छ, अदेख्य त्यो त्यही रूपमा छैन । सवर्गीय द्वन्द्व ठुलो छ, निकै गढेको पनि छ । थुप्रै कथा कहानी, शृङ्खला र नाटकहरू रचिएका छन् । तर सत्ता अहिले पनि आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा छ ।
कलाकार स्वभावैले उदात्त, मानव ‘स्व’ वोधी र नीति आदर्शका परिचायक हुन् । मानव आदर्श र वेदनाहरू कलाका माध्यमबाट प्रस्फुरित हुन्छन् । त्यसैले कलाकारहरूको सत्ता स्नीग्ध, स्वच्छ र सुसंस्कृत हुनुपर्ने हो । तर सर्जकहरू सिर्जनाकै लागि पनि सङ्घर्षमा छन्, स्वार्थका लागि पनि संघर्र्षमा छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सत्ता र सम्भान्तको वलय बनेर कलाकार सत्ताले आफ्नोपन गुमाएको छ । आखिर स्वाद जहाँ पनि छ । त्यसैले तुष्टिको राम्रो नराम्रो बाटोमा गायक नायक, गीतकार साहित्यकार सबै दौडिएका छन् । स्वार्थ, लोभ, लालसा, प्रतिष्ठा र परिचयका लागि कर्म भुलेर वायुपङ्खी दौडमा छन् । महाकवि देवकोटालाई तत्कालीन साहित्यसत्ताले पागल घोषणा गरेथ्यो । उनले पनि कवितामै प्रतिकार गरेथे । कति राम्रा स्वर र श्लोकका धनी स्वार्थपूर्तिको लोभमा राजनीतिक सत्ताको जयजयकारमा दौडिएका छन् । राजा महाराजाकै स्तुतिमा श्लोक र स्वर फुरेका पनि छन् । यो कला सत्ताको नै मान मर्दन हो । जनताका वोली कला मूल्यमा देखिनु पर्दैन र ? तर सिर्जना मार्फत आदर्श ओकल्न पात्रहरू पछि पर्दैनन् ।
मोफसलका सत्ता र सहर बजारका सत्ताहरूबिच भुसे आगोको द्वन्द्व छ । मोफसलहरू सहरबाट सीमान्त करणमा छन् । किनारा पर्नुको रोष मोफसलमा छ । सहर सुविधा र अवसरको केन्द्र हो, मोफसल सहरलाई उत्पादन आधार दिन्छ । सहर सजिलो छ, मोफसल श्रमिलो छ । साहित्य कला, गीत सङ्गीत मञ्चन चलचित्र सवैमा सुविधा सीमाङ्कन छ । मोफसल सुविधाको किनारमा छ । बञ्चितीको विद्रोह थुमथुम्याउँदै सहर अग्रगतिमा पैया ठोकी रहेको छ । मोफसल रोष र ईर्ष्या दबाएर समावेशिताको सम्झौतामा छ । प्रविधिले पनि पहूचका बन्देजहरू भत्काउँदै त लगेको छ । तर नयाँ खाले सङ्घर्षका ढोकाहरू नखुल्लान् भन्न सकिन्न ।
डन, तस्कर र अपराधीहरूको पनि निकै गठिलो, अनुशासित र आक्रामक भूमिकापूर्ण आआफ्नै सत्ता छ । उनीहरूको अन्तरसंघर्ष पनि त्यत्तिकै आक्रामक छ, त्यहाँ आलोचना र आत्मालोचनाको गुञ्जायस निकै कम छ । राजनीतिक सत्ताजस्तो यी सत्ताहरू भाषण, गोष्ठी र इन्क्लाब गर्दैनन् । अपराधको सत्ता अनुशासनले मात्र टिक्ने हो । अपराध अनुशासनका आफ्नै मानक होलान् । त्यहाँ प्रतिस्पर्धीको अस्तित्व नै स्विकारिँदैन । तर औपचारिक सत्ता यसको चालै पाउँदैन, परिणामबाट पीडित हुन पुग्छ । उनीहरूको सञ्जाल, सूचना र सम्बन्ध प्रणाली, नीति कार्यनीति र जुक्तिहरू निकै आक्रामक र गतिशील देखिन्छन् । तर ती अरू सत्ताले स्थापित गरेका निर्माण र मूल्य भत्काउन उद्यत छन् ।
साधु, योगी, साधक, उपासकहरू आध्यात्मिक हुन्छन् । चैतन्य चिन्तन उनीहरूको कर्म हो, जुन चिन्तनबाट मानव सत्ता अपरिमित आनन्द पाउने गर्छ । आत्मिक चिन्तन गर्छन्, स्वार्थान्धता देखाउँदैनन् । उपदेश दिन्छन् र साधना सिकाउँछन् । तर उनीहरूको सत्ता पनि स्वादिलो छ । उनीहरूको सत्ताले पनि पहिचान र वर्चस्व खोज्छ । सत्तास्वादले मान मस्तिष्कलाई विषाक्त पार्छ । योगी, साधु, साधकहरू मञ्च, प्रतिष्ठा, सम्मानमा साँघुरिन हुन्छ र ? हुन्छ भने उनीहरूको साधना शिक्षाबाट मानव सत्ता कसरी आदर्श बन्ने प्रेरणामा पुग्छ ?
धर्मको सत्ता अफिम जस्तै लठयाउने खालको छ । ईश्वरका उपासकहरू सेवा ही परमो धर्म अलाप्दै अफिमको नशामा लट्ठिन्छन् । ईश्वरका नाममा समाजको कित्ताकाट गर्छन् । आफूतिर सम्प्रदायप्रति अस्त्र प्रयोग गर्छन्, निकै निष्ठुर हुन्छन् । हिन्दु इसाई, मुस्लिम, बौद्धिष्टबीच मात्र होइन, त्यहीभित्रका सम्प्रदायहरू नै एक अर्काप्रति संयमित छैनन् । सिया र सुन्नी, क्याथोलिक र प्रोटेष्टेण्ट, शैव र वैष्णव, महायान र हिनायान सहभावमा रहँदैनन् । रहन्थे त अर्को सम्प्रदाय किन जन्मन्थ्यो ? राजनीतिक सत्ताबाट टुक्रिएका दलजस्तै धर्म सत्ताबाट सम्प्रदाय छुट्टिए र एक अर्कोप्रति उछित्तो काट्न थाले । धर्मसत्ता ईश्वरीय हुन सकेन, मानवतामा धर्म देखिएन र आचरणमा खोक्रोपना देखिन थाल्यो । त्यसपछि धर्मसत्ताको महत्ता नै कति ?
बुद्धिजीवीहरूको सत्ता ठूल्ठूला गफ दिएर अरू सत्तालाई उपयोग गर्छन् । याने कि बुद्धिको व्यवसाय गर्छन् र सत्तास्वादमा रमाउँछन् । समाजको चिन्तन गरेर समाधान दिने होइन कि बुद्धिकै व्यवसायमा रमाउँछन् र अरूलाई मूर्ख बनाउँछन् । बुद्धिजीवीहरू विवेक र ज्ञान बाँडेर समाजको उत्थानशील रूपान्तरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट परै छन् । र पनि भनिरहेका छन्, हामी नागरिक समाज, हामी समाजको मार्गदर्शक, सिद्धान्तका प्रणेता, दर्शनका अध्येता आदि आदि । चिन्ता, चिन्तन र चुनौती बोध नभएपछि बुद्धिजीवी मात्र हुने भए ।
राजनीतिको सत्ताले अरू सत्तालाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोग गर्छ, अरू सत्ता राजनीतिकृत भएर आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्छन् । यो माखे साङ्लो सत्ताको महत्ता विकृत गर्न उद्यत रहन्छ ।
अरू धेरै सत्ताहरू जन्मेका छन्, जन्मँदै छन् । पुस्ता पुस्तामा सत्ताका खातहरू थपिँदै जानेछन् । प्रत्येक सत्ताले राम्रा नराम्रा आफ्नै मानक र प्रणाली बनाउँछ, अस्तित्व र महत्त्व खोज्छ । जति धेरै सत्ता भए पनि साझा चरित्र चाहिँ शक्ति, सङ्घर्ष र स्वाद हो । महत्ता र आदर्श होइन ।